Yohane Adiyisɛm 19:1-21
Munyi Yah ayɛ wɔ n’atemmu ho (1-10)
Oguammaa no ayeforohyia (7-9)
Obi a ɔte ɔpɔnkɔ fitaa so (11-16)
Onyankopɔn apontow kɛse (17, 18)
Wodii akekaboa no so nkonim (19-21)
19 Eyi akyi no, metee biribi te sɛ nnipadɔm kɛse bi nne a ano yɛ den wɔ ɔsoro. Wɔkae sɛ: “Munyi Yah ayɛ!*+ Nkwagye ne anuonyam ne tumi yɛ yɛn Nyankopɔn dea, 2 efisɛ n’atemmu yɛ nokware na ɛteɛ,+ na wabu tuutuuni kɛse a ɔde n’aguamammɔ* sɛee asaase no atɛn, na ne nkoa mogya a ɛwɔ tuutuuni no nsa ho* no, watua no so ka.” + 3 Ntɛm ara, wɔkae ne mprenu so sɛ: “Munyi Yah ayɛ!*+ Na wusiw a efi ne* mu no foro kɔ soro daa daa.”+ 4 Na mpanyimfo 24+ ne ateasefo* baanan+ no de wɔn anim butubutuw fam, na wɔsom Onyankopɔn a ɔte ahengua no so no, na wɔkae sɛ: “Amen! Munyi Yah ayɛ!”*+ 5 Afei nso, ɛnne bi fii ahengua no so bae sɛ: “Munyi Onyankopɔn ayɛ, mo a moyɛ ne nkoa+ a musuro no nyinaa, nketewa ne akɛse.”+ 6 Na metee nne bi a ɛte sɛ nnipadɔm kɛse bi nne ne nnyigyei a ɛte sɛ nsu bebree a ɛrebu fa so ne aprannaa a ano yɛ den. Wɔkae sɛ: “Munyi Yah ayɛ,*+ efisɛ Yehowa* yɛn Nyankopɔn, ade nyinaa so Tumfo+ no afi ase redi hene!+ 7 Momma yenni ahurusi na yɛn ani nnye mmoro so, na yɛnhyɛ no anuonyam, efisɛ Oguammaa no ayeforohyia adu, na ne yere asiesie ne ho. 8 Yiw, wɔama no kwan sɛ omfura nwera pa a ani tew a ɛhyerɛn, efisɛ nwera pa no gyina hɔ ma adetrenee a akronkronfo+ no yɛ.” 9 Na ɔka kyerɛɛ me sɛ, “Kyerɛw sɛ: Anigye ne wɔn a wɔato nsa afrɛ wɔn sɛ wɔnkɔ Oguammaa no ayeforohyia apontow+ ase.” Afei nso, ɔka kyerɛɛ me sɛ: “Eyi ne nokwasɛm a efi Onyankopɔn hɔ.” 10 Ɛnna mibutuw ne nan ase sɛ meresom no. Nanso ɔka kyerɛɛ me sɛ: “Hwɛ yiye! Nyɛ saa!+ Meyɛ akoa kɛkɛ te sɛ wo ne wo nuanom a wokura Yesu ho adansedi adwuma+ mu no. Som Onyankopɔn!+ Efisɛ Yesu ho adansedi na ɛma wɔhyɛ nkɔm.”+ 11 Mihui sɛ ɔsoro abue, na hwɛ! ɔpɔnkɔ fitaa+ bi ni. Na nea ɔte no so no, wɔfrɛ no Ɔnokwafo+ a Onni Huammɔ;+ obu atɛn, na ɔko wɔ trenee mu.+ 12 N’ani yɛ ogyaframa,+ na ahemmotiri bebree bobɔ ne ti. Ɔwɔ din bi a wɔakyerɛw a obiara nnim gye ɔno nko ara. 13 Ɔhyɛ ataade bi a mogya akeka* mu, na edin a wɔde frɛ no ne Onyankopɔn Asɛm.+ 14 Afei nso, na asraafodɔm a wɔwɔ ɔsoro no tete apɔnkɔ fitaa so di n’akyi, na na wɔhyehyɛ nwera pa fitaa a ani tew. 15 Ná sekan tenten bi a ano yɛ nnam apue afi n’anom,+ a ɔde bekunkum amanaman no, na ɔde dade poma bedi wɔn so.*+ Bio nso, otiatia ade nyinaa so Tumfo Nyankopɔn abufuw ne n’abufuhyew amoa a wokyĩ nsã* wom no so.+ 16 Ɔwɔ din bi a wɔakyerɛw agu n’ataade mu, yiw, wɔ ne srɛ so sɛ, ahemfo mu Hene ne awuranom mu Awurade.+ 17 Mihuu ɔbɔfo bi nso a ogyina owia mu, na ɔde nne kɛse teɛɛm ka kyerɛɛ nnomaa a wotu fa wim nyinaa sɛ: “Mommra ha, mummehyia Onyankopɔn apontow kɛse no ase,+ 18 na mummedi ahemfo nam ne asahene nam ne ahoɔdenfo nam+ ne apɔnkɔ ne wɔn a wɔtete wɔn so no nam,+ ne obiara nam, wɔn a wɔade wɔn ho ne nkoa, ne nketewa ne akɛse.” 19 Na mihuu akekaboa no ne asaase so ahemfo ne wɔn asraafodɔm sɛ wɔaboaboa wɔn ho ano sɛ wɔne nea ɔte ɔpɔnkɔ no so no ne ne dɔm rebɛko.+ 20 Na wɔkyeree akekaboa no ne atoro diyifo+ a ɔyɛɛ nsɛnkyerɛnne wɔ n’anim de daadaa wɔn a wonyaa akekaboa no ahyɛnsode+ no ne wɔn a wɔsom ne honi+ no. Afei wɔtow wɔn baanu nyinaa guu ogya tare a sɔfe* redɛw wom+ no mu animono. 21 Na wɔn a aka no, wɔde nea ɔte ɔpɔnkɔ no so no sekan tenten a efi n’anom bae no kunkum wɔn.+ Na nnomaa no nyinaa dii wɔn nam mee.+
^ Nt., “efi tuutuuni no nsam.”
^ Anaa “tuutuuni no.”
^ Anaa “abɔ apete.”
^ Nt., “ɔde dade poma bɛyɛn wɔn.”